Maxkamadda Sare ee Somaliland oo ayiday doorashadii Muuse Biixi
Maxkamadda Sare ee Somaliland oo ayiday doorashadii Muuse Biixi [Daawo]
By Wariyaha Hargeysa , GAROWE ONLINE
Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynaha la doortay ee Somaliland
HARGEYSA, Somaliland - Maxkamadda Sare ee Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqday inay ansixisay natiijada doorashadii madaxtinimada ee 13-kii November ka dhacday maamulkaasi, oo ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi.
Gudoomiyaha Maxkamadda sare ee Dastuuriga Somaliland Aadan Xaaji Cali, oo maanta shir jaraa'id ku qabtey xarunta Maxkamadda ee Hargeysa ayaa qaraarka u akhriyay warbaahinta, kaasi oo lagu ayiday doorashada.
Wuxuu tilmaamay in aysan jirin cid dacwad ama cabasho kasoo gudbisay doorashada Muusi Biixi, sidaasi darteedna ay doorashada Muuse Biixi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ku tahay mid ansax ah.
Doorashada oo ay ku tartameen saddexda xisbi Siysaadadeed ee Somaliland, ayaa waxaa ku guuleystay xisbul xaakimka Kulmiye, oo tan iyo 2010-kii majaraha u hayay talada iyo awooda maamulkaasi.
Gudoomiyaha xisbiga WADDANI, sidoo kalena ahaa musharaxooda doorashadii dhacday Cabdiraxmaan Cirro, ayaa cabasho ka keenay qaabkii ay u dhacday doorashad, isagoo sheegay in lagu shubtay codadka, iyadoo la adeegsaday warqado been abuur ah oo goobo badan looga codeeyay.
Cirro waxa kaloo uu ku eedeeyay gudiga doorashada musuq-maasuq, kadib markii sida uu sheegay kaararka codbixinta lagu soo daray dad geeriyooday iyo caruur aan qaangaar ahayn. Halkan ka kahri.
WADDANI ayaa sidoo kale xusay in mas'uuliyiin korjoogiyaal u ahaa la jirdilay, qaar badan oo taageeriyaashiidana la xiray, waxaana uu qaadacay labo jeer natiijada doorashada, kahor inta aan lagu dhawaaqin iyo kadib markii la shaaciyay inuu Muuse Biixi ku guulaystay xilka Madaxweyne.
Sidoo kale, Feysal Cali Waraabe oo u tartamay UCID ayaa sheegay in doorashada Somaliland u dhacday qaab beleed, balse magac u soo jiitey dadka Soomaalida ee lagu bartey argagixiso iyo burcadeyn Halkan ka akhri.
Dhowr magaalo oo Burco iyo Hargeysa ay kamid yihiin ayaa ka dhacay rabshado ay labo qof ku dhinteen 20 kalena ay ku dhaawacmeen, kadib markii ay isku dhaceen taageeriyaasha WADDANI iyo Ciidamada.
Muuse Biixi oo loo dhaariyay Madaxweynaha 5aad ee Somaliland
Somaliland 13.12.2017. 12:41
Muuse Biixi Cabdi ayaa loo dhaariyay maanta Madaxweynaha 5aad ee Somaliland...
Cirro oo qaadacay Natiijada Doorashada Somaliland [DAAWO]
Somaliland 20.11.2017. 23:25
Shacabka Somaliland oo u dareeray goobaha codbixinta [Sawirro]
Somaliland 13.11.2017. 08:33
Madaxweynaha Somaliland oo u Safray Jabuuti [Video]
Somaliland 06.01.2018. 17:33
Xisbiga WADDANI oo isusoo baxii ugu danbeyey ka sameeyay Hargeisa
Somaliland 10.11.2017. 14:15
Akhriso Waqtiga lagu dhawaaqayo Natiijada Doorashadii Somaliland
Somaliland 20.11.2017. 13:40
Gudiga Doorashada Somaliland oo ka warbixiyay tirinta codadka
Somaliland 14.11.2017. 17:38
Siilaanyo oo qiray in doorasho ka dhicin qeybo kamid ah Somaliland
Somaliland 18.11.2017. 17:18
Itoobiya, Suudaan iyo Masar oo dib u bilaabay wadahadalka biyo xireenka 04.08.2020. 10:10
Shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha Dhoobley 04.08.2020. 09:50
Wariye maxkamad loosoo teegay dil ka dhacay magaalada Muqdisho 03.08.2020. 19:00
Shariif, Xasan Sheekh iyo madax kale oo baaq kasoo saaray doorashada 03.08.2020. 14:35
Dad ku dhintay is-miidaamin ka dhacay nawaaxiga dekada Muqdisho 03.08.2020. 13:55
Imaaraadka Carabta iyo Iiraan oo yeeshay wadahadalo dhif ah 03.08.2020. 12:30